Usoro ojiji - InstaZOOM
Mbido » Usoro ojiji
Site na iji webụsaịtị anyị, ị na-ekwupụta na ị kwenyere na usoro na ọnọdụ ndị a. Biko gụọ ha nke ọma ma hụ na ị na-akwado ha.
1. Ọ bụ iwu kwadoro iji webụsaịtị anyị.
2. Anaghị anabata iṅomi ihe nwebiisinka.
3. Anaghị ekwe ka ọ gafee instazoom.mobi gbasaa faịlụ ebudatara.
4. Naanị ị nwere ikike iji ha maka ebumnuche nkeonwe.
5. Anyị anaghị edekọ ihe na-eme na sava anyị.
6. Anyị anaghị echekwa faịlụ na sava anyị ruo mgbe ebighị ebi.
7. Arịrịọ maka nbudata bụ ndị ọrụ n'onwe ha, dịka ọ dị na DMCA (Iwu Millennium Copyright Act) kọwara.
Usoro ojiji zuru oke:
Ọ bụrụ na ị instazoom.mobi eji ma ọ bụ na instazoom.mobi ohere, ị kwenyere na usoro ojiji nke instazoom.mobi dị ka e depụtara n'akwụkwọ a. Ịnweghị ikike instazoom.mobi ma ọ bụ iji ọrụ ya ma ọ bụrụ na ịnakwere usoro ndị a.
Ị kwenyere na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike iziga gị mmelite na usoro ojiji ndị a n'oge ọ bụla na-enyeghị ihe kpatara ya. Ị kwenyekwara ka mgbanwe n'ọdịniihu na Usoro ojiji ndị a ozugbo ebisara ha na webụsaịtị.
Ọ bụrụ na ịnakwenyeghị otu n'ime usoro ojiji ndị a, nkwenye gị ga-ekubi ume ozugbo ma ọ bụrụ na ị mebie otu n'ime usoro ndị a. N'uche nke instazoom.mobi Enwere ike ịkwụsị akwụkwọ ikike a n'oge ọ bụla na-enyeghị ihe kpatara ya.
Emelitere ibe a ikpeazụ na Jenụwarị 1st, 2014.
Iji faịlụ ndekọ
Anyị anaghị edekọ adreesị IP ọ bụla ma ọ bụ data onye ọrụ sitere na ndị ọbịa anyị. Anyị na-eji Google Analytics hụ mmadụ ole na-aga na webụsaịtị anyị. http://www.google.com/analytics/tos.html
Anyị na-eji ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ iji kpọsaa ozi instazoom.mobi Ka igosi mgbasa ozi. Ụfọdụ ọrụ mgbasa ozi na-eji teknụzụ dị ka kuki na mgbama weebụ mgbe ha na-akpọsa ozi na webụsaịtị anyị, nke na-ezigara ndị mgbasa ozi ozi gbasara gị. Nke a dị mkpa iji gosi gị mgbasa ozi n'asụsụ nke gị. Gụkwuo maka ọrụ ha na webụsaịtị ha.
1. Emebila iwu ọ bụla na obodo gị.
2. Adịla nbudata egwu na-akwadoghị nwebiisinka.
3. Instazoom- Enwere ike iji faịlụ naanị maka ebumnuche nkeonwe yana enweghị ike ibufe ma ọ bụ kesaa ya.
Ị kwenyere na usoro na ọnọdụ ndị a site na iji webụsaịtị anyị.
DMCA ma wepụ ya
- Nke a bụ ngwá ọrụ dị mfe maka Instazoom iji gbasaa foto.
- Anyị anaghị akwado faịlụ onyonyo.
- Weebụsaịtị a anaghị akwado mbipụta pirated.
- Tupu ịkpọtụrụ anyị, biko gụọ ibe a: DMCA.
- Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe nwebisiinka nke onyonyo ma chọọ igbochi ntụgharị ya, biko zitere anyị email.
Anyị ga-akwụsị ịtụgharị onyonyo ndị a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ aro gbasara ọrụ anyị, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị: [email protected]